Dinika momba ny fahefana amin’ny tany demokratika - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mafanafana ny toe-draharaham-pirenena eto amintsika ankehitriny. Rehefa jerena anefa ny antony dia resaka fahefana, resaka fanamparam-pahefana na tsindrim-pahefana mihatra. Rehefa tsy araka ny lalàna ny fampiharam-pahefana dia zary tsy refesi-mandidy sy fampihorohoroana. Ary rehefa terena ho lalàna ny sitrapon’ny mpitondra dia fanararaotana ataon’izay mihevi-tena ho manam-pahefana izany.
Tsy vaovao izany fa teo amin’ny fitsarana i Jesoa sy i Pilaty dia efa niaina izany : « Tsy fantatrao angaha fa manam-pahefana handefa anao aho, no manam-pahefana hamantsika anao amin’ny hazofijaliana koa »…. Dia hoy i Jesoa : « Tsy hanam-pahefana amiko ianao raha tsy nomena anao avy any ambony izany. » (Jo19,10-11). Amin’ny tany demokratika, ny fahefana dia avy amin’ny vahoaka. Ary amin’ny anaran’ny vahoaka no hitsarana sy handraisana fanapahan-kevitra ary hampiharana ny lalàna. Fa tsy avy any ambony. Tamin’ny andron’i Heroda mpanjaka sy ny amperora Romanina no nisy fahefana avy any ambony. Izao resaka mafana izao izany dia fotoana hianarana ny demokrasia, izany hoe « ny fahefam-bahoaka marina » nampindramina ny mpitondra.
Ny vahoaka koa izany dia mila mahafantatra ny fahefany satria « firenena iray ny vahoaka Malagasy, ary mivondrona ho fanjakana masi-mandidy…Ny demokrasia no fototra iorenan’ny repoblika. Eo amin’ny faritry ny tany eken’ny lalàna iraisam-pirenena ho azy no maha masi-mandidy azy. » (Lalàm-panorenana and. 1). Sady mianatra ny demokrasia ny vahoaka no mianatra ny fahefana masi-mandidy.
Ny mifanohitra amin’ny hoe « masi-mandidy » dia ny hoe « manaiky ho andevozina an-tsitra-po ». Raha ny olona nampindramina fahefana no lasa tsy refesi-mandidy amin’ny vahoakany, dia tsy tsinin’ny mpitondra, fa hadalan’ny vahoaka nametraka fahefana hamoritra azy. Na lehibe aza hono manko ny vato, rehefa tsy miteny taingenan’ny vorona. Misy manaiky ho taingenana satria faly amin’ny tombontsoa azo.
Ilay fanontaniana nataon’i Pilaty amin’i Jesoa : « Inona no marina ? » no zary fototry ny fifandirana. Ohatra, enjehina noho ny loko politika ny mpitarika sendika na ny minisitra teo aloha, dia amoronana « dossiers ». Baiko avy any ambony no ho tanterahan’ireo « andevo an-tsitra-po », araka ny bokin’i Etienne de la Boétie (taon-jato faha-16)« discours sur la servitude volontaire ». Ny hevitry ny mpitondra araka ny nahim-pony sy izay tiany enjehina no zary lalàna eo amin’ny tanin’ny repoblika, hany ka voahosihosy ny « marina ».
Eto no miditra ilay resaka fampisaraham-pahefana. Fifampifehezana no dikan’ny « fampisarahana » mba hialana amin’ny tsy refesi-mandidy. Ny fampanjakana ny marina no tanjon’ny fahefana mifampifehy. Ary fampiharana ny lalàna ara-drariny eo amin’ny tany demokratika sy repoblikanina no filamatra. Mahatsapa anefa ny maro fa tsy izany no zava-misy. Ny antokon’ny maro an’isa dia manao didiko fe lehibe amin’ny fanapahan-kevitra politika. Ny maro an’isa anefa dia ireo solontenan’antoko amin’ny andrim-panjakana mpanao lalàna. Vokany, ao amin’io sehatra io, ny antoko sisa no atao hoe « vahoaka Malagasy tsy refesi-mandidy ». Baikoin’ny politikan’antoko araka izany ny fahefana demokratika. Teraka ho azy ilay « avy any ambony sandoka » satria avy aty ambany ny fahefana demokratika fa tsy avy any ambony. Ilay baiko midina etsy sy eroa no avy any ambony, misy eto amintsika. Tsy misy manam-pahefana ambony tsy refesi-mandidy raha tsy misy olona mandohalika eo alohany, manaiky fanandevozana ka handa ny fahaleovan-tenany.
Zary fitaovana mampihorohoro eo amin’ny tanin’ny repoblika demokratika araka izany ny fahefam-panjakana raha toa ny vahoakan’ny firenena mbola mijanona ho « valala be mandry ». Ny vahoaka anefa tsy natao handady rariny satria izao no ambaran’ny lalàna : « …tsy misy ampahany amin’ny vahoaka na olon-tokana mahazo manendry tena hampiasa izany fahefana feno izany ».
« Aiza ho aiza isika ry Dadabe ? « Eto an-tampon’ny Samireraka anaka ! »
Matoan-dahatsoratra : Raha mbola misy koa ny fanantenana ! - il y a 1 moi
Matoan-dahatsoratra : Vonjeo ny repoblika - il y a 2 mois